သတင်းများ – Hlawga National Park
လှော်ကားဥယျာဉ်သို့အစာလာရောက်လှူဒါန်းကြသောတိချစ်သူများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။ ယခုအချိန်သည် အသက်ရှူလမ်းကြောင်ဆိုင်ရာ ရောဂါပိုး COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေပါသောကြောင့် နိုင်ငံတော်မှလည်း လူစုလူဝေးမဖြစ်ပွားရန်တားမြစ်ခြင်းများ ရှိနေပါသည်။ ဥယျာဉ်မှလည်း အစာလာရောက်လှူဒါန်းသူများကို လူအရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်ဖြင့် လက်ခံနေပါသည်။ အလှူရှင်များအနေဖြင့် အစားလာရောက်လှူဒါန်းပါက ကြိုတင် Booking တင်ကြစေလိုပါသည်။ ဥယျာဉ်အနေဖြင့်လည်း...
မေး ။ လှော်ကားဥယျာဥ်ပြန်ဖွင့်ပြီလား ၊ ဘယ်တော့ပြန်ဖွင့်မှာလဲ။ ဖြေ ။ ဟုတ်ကဲ့ ပြန်မဖွင့်သေးပါဘူးခင်ဗျာ၊ ဘက်ဆိုင်ရာဌာနတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုရတဲ့အခါ Hlawga Facebook Page မှာကြေငြာပေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ မေး ။ အစာလာကျွေးလို့ရလား ။ ဖြေ...
လှော်ကားချစ်သူတို့ရေ အစီအစဉ်အသစ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Birds Watching Tour လေးနဲ့မိတ် ဆက်ပေး ပါရစေ။ ဒီအစီစဉ်လေးမှာဘာတွေလုပ်လို့ရမှာလဲဆိုရင်တော့ 🔹ဆောင်းခိုငှက်ကလေးတွေ နဲ့ လှော်ကားဥယျာဉ်အတွင်း သဘာဝအတိုင်းပျံသန်း ကျက်စားနေကြတဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို ကြည့်ရှုလေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 🔹အိမ်မှာနေရတာကြာတော့ ငြီးငွေ့ နေကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်း သဘာဝတောအုပ်လေးထဲမှာ...
Private Tour! မြို့ပြနဲ့သိပ်မဝေးလှပဲ သဘာဝရဲ့အငွေ့အသက်တွေကို အပြည့်အဝခံစားလို့ရမယ့် နေရာလေးကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့လှော်ကားဥယျာဉ်ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ လှော်ကားဥယျာဉ်ရဲ့ Private Tour အစီအစဉ်လေးကတော့ လှော်ကားဥယျာဉ်ဖွင့်လို့မရသေးပေမယ့် စိတ်အပန်းဖြေဖို့နဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို အစာလာကျွေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ အဖွဲ့အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားသလို တစ်ဖွဲ့ကို ၂ယောက်မှစပြီး ၁၀ယောက်ထိပဲလက်ခံပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Private...
ခရီးဝေးဝေးသွားဖို့ကလည်း အချိန်လုံလောက်မှုမရှိသလို ခရီးလေးသွားလိုက်ရသလို ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မှာ အပန်းဖြေလိုသူတွေအတွက် လှော်ကားဥယျာဉ်ရဲ့ ဘန်ဂလိုလေးမှာ အပန်းဖြေဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ သဘာဝတောအုပ်လေးထဲမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ၊ ကန်ရေပြင်ကတိုက်ခက်လာတဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်သောလေကောင်းလေသန့် တွေတဝကြီးရှူလို့ရမယ်။ သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုတွေနဲ့အတူတူ 🎲 Board Game တွေဆော့ကြမယ်...